कञ्चनपुरमा एक शिक्षक जो एकै साथ दुई पार्टीमा कृयाशील छन् | खप्तड अनलाईन
कञ्चनपुरमा एक शिक्षक जो एकै साथ दुई पार्टीमा कृयाशील छन्
January 06, 4:23
कञ्चनपुर,२२ पुष / कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–८ का महेशदत्त भट्ट शिक्षण पेशामा संलग्न छन् । उनी तिलाचौरस्थित वालजागृती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत हुन् । शिक्षकले प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुन पाइदैन । तर, भट्ट भने एकैपटक दुई पार्टीमा कृयाशील भएको पाइएको छ ।
उनी ३ भदौमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले दुबैमा कृयाशील भएको पाइएको हो । समाजवादीको संगठन निर्माणमा खटिइरहेका भट्टलाई उनकी पत्नी दुर्गा भट्टले पनि साथ दिइरहेकी छन् ।
भट्ट दम्पत्ती अहिले समाजवादीमा खुलेपनि दुबैजनाले नेकपा एमालेको संगठित सदस्यता भने परित्याग गरिसकेका छैनन् । बरु त्यसलाई नवीकरण गर्दै आएको पाइएको छ । प्रअ भट्ट वकालत र बीमा सम्बन्धि कामसमेत गर्छन ।
नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर ३ भदौमा नेकपा एकीकृत समाजवादी जन्मिएको थियो । सोही महिनाको २३ र २८ गते एमालेको कञ्चनपुरस्थित पार्टी कार्यालयमा गएर भट्ट दम्पत्तीले सदस्यता नवीकरण गराएका हुन् ।
शिक्षण पेशामा भएकाले महेशदत्त भट्टले आरके भट्टका नाममा सदस्यता लिएका थिए । उनको सदस्यता नं. ६७४१७ हो । यस्तै उनकी पत्नीले दुर्गा देबी भट्ट जोशीका नाममा सदस्यता लिएकी छन् । उनको सदस्यता नं. २१९७४८ रहेको छ ।
‘उहाँहरु दुबैजना नवीकरणबापतको शुल्क तिरेर जानु भएको हो । त्यसपछि पार्टीमा कुनै खबर गर्नु भएको छैन्,’ एमाले कञ्चनपुरका कार्यालय सचिव कर्णबहादुर चन्दले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयबाट दुबैजनाको सदस्यता नविकरण भएर आएको छ ।’ सिमारेखा बाट साभार